Yiziphi izindlela zokwenza i-Amazon TOP ukusesha?
Ukuze uthole umbono omuhle wokuthi ungabheka kanjani ama-TOP TOP ama-Amazon, udinga ukuthola isithombe esicacile sokuthi ukudayisa ku-Amazon kuhlanganisa yini. Ukuze uqiniseke ukuthi ukwakha kahle umkhankaso wakho wokumaketha, hlola lokhu okuthunyelwe ukuze ubone izici zokuthuthukisa okufanele wazi. Lokhu okuthunyelwe kuzokuvula amehlo akho ku-Google Treasure trove futhi kukusize ukhulise imali lapho ngaphandle kwemizamo.
Ukuhlola abapheqululayo ku-Amazon
hamba ekhasini eliyinhloko lomkhiqizo bese uchofoza ukunikezwa okwethulwa ngezansi incazelo yomkhiqizo ukuhlola iziphakamiso ezitholakalayo - curso de fotografia online con titulo. Nokho, into yokuqala ama-Amazon abathengisa ngokuvamile ukuhlola ibhokisi lokuthenga. Lesi sigaba sikhombisa ukuhluka okuhle kakhulu ngaphakathi kwe-niche yemakethe. Ngokombiko wezinombolo, ukuthengiswa kwemali engu-$ 56 billion ye-Amazon engu-$ 62 billion kwenzeka lapha. Abathengi bazi ukuthi bangathembela ku-Amazon choice ngoba kuthatha izici ezihlukahlukene ezifana nentengo, ikhwalithi, ukubaluleka, njalonjalo. Ukusebenzisa ibhokisi lokuthenga, amakhasimende angaqala inqubo yokuthenga ngokungeza imikhiqizo ngqo emakethe.
Ngenxa yomncintiswano ophezulu e-Amazon, akuyona umsebenzi olula ukuba umthengisi ovelele ozuza ibhokisi lokuthenga. Akusho ukuthi uma ubeka phezulu ku-Amazon SERP, uzoba umthengisi ovelele. Ukuwina ibhokisi lokuthenga, kuzomele ulandele iziqondiso ze-Amazon futhi ube yigugu kumakhasimende akho.
Izici ezithinta lapho umthengisi avela khona ohlwini lokunikezela:
Udinga ukuhlinzeka abasebenzisi ngenani lokuncintisana ukunqoba ibhokisi lokuthenga. Akubandakanyi izindleko zomkhiqizo kuphela kodwa nezindleko zokuthumela. Abathengi abafuna imikhiqizo edingekayo e-Amazon bangaqhathanisa wonke amanani futhi cishe banquma intengo ephansi emakethe. Ukuze ugcine intengo yakho ukuncintisana, kudingeka uhlaziye ngokuncintisana ngokuncintisana njalo. Ngaphezu kwalokho, kunengqondo ukusebenzisa amathuluzi okukhokha imali.
Okunikezwayo kufanele kube nokuncintisana njengoba abathengisi abaningi bekhona, ukhuphukela phezulu.
Ukuwina ibhokisi lokuthenga ku-Amazon, udinga ukuba nomlando omude wokuthengisa. Ama-Amazon acabangela ukubuyekezwa kwamakhasimende akho kanye nenani elijwayelekile lokuthenga ngenyanga. Njengomthetho, imikhiqizo esanda kuvela kuma-marketplace e-Amazon ayikwazi ukubonakala abathengisi.
Ezinye izici eziningi zithinta ukukhetha kwe-Amazon yomthengisi oveziwe. Noma kunjalo, izici ezibalwe ngenhla ziyizinamandla kakhulu. Ikhambi eliphumelela kunazo lapha ukuqinisekisa ukuthi noma yiziphi izinkokhelo ozithola nge-Amazon zigijima kahle. Udinga ukuhlinzeka amakhasimende ngesekelo eliphezulu lamakhasimende futhi uhlale uwusizo..
I-Amazon ukugcwaliseka uhlelo ollanywa i-Amazon ukusiza abathengisi be-intanethi abathengise imikhiqizo yabo. Ukusebenzisa lolu hlelo, ungathumela izimpahla zakho kwenye yezindawo eziningi zokugcwalisa ama-Amazon ukuze zigcinwe. Kusho ukuthi isikhathi ngasinye lapho amakhasimende ethenga imikhiqizo evela kuwe, i-Amazon iyabathumela. Lolu hlelo lusiza ukuthi ulondoloze isikhathi sakho futhi ugxile kwezinye izici zokuqhuba ibhizinisi lakho. I-Amazon ithatha izingqinamba eziningi zokuthunyelwa kanye nokusekelwa kwamakhasimende kanye nokwandisa ukufinyelela kwemikhiqizo yakho kumalungu e-Amazon Prime, nokusiza ukunqoba ibhokisi lokuthenga.
Ukubuyekezwa komkhiqizo omuhle kubalulekile kwizinga lakho eliphezulu e-Amazon. Kumele kuqashelwe ukuthi sikhuluma ngokubuyekezwa kokufakwa kuhlu kwekhasi lakho lomkhiqizo, kodwa hhayi mayelana nokuphazamiseka kwiphrofayela yakho yomdayisi. Njengoba i-Amazon yokugcina i-algorithm ivuselela, akuvunyelwe ukuqala abasebenzisi ukushiya izibuyekezo ngokubuyisela izipho, izaphulelo, njll. Yingakho udinga ukuthola izibuyekezo ngokomzimba. Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokwenza lokhu ukuhlinzeka ngamakhasimende akho ngesipiliyoni esingcono kakhulu sokuthenga. Zama okusemandleni akho ukukhiqiza ukubuyekezwa komkhiqizo omuhle njengoba ziholela ezikhundleni eziphakeme nakwezinye izindawo zokusesha, futhi ngemuva kwalokho ama-oda amaningi nokuthengisa. Amagama angukhiye
Kubalulekile ukufaka amagama akho okucinga okuhlosiwe esihlokweni somkhiqizo, incazelo, namaphoyinti e-bullet. Okokuqala, udinga ukwenza ucwaningo lwegama elingukhiye bese uthole okufanele kakhulu emibhalweni yakho yokusesha ibhizinisi engasetshenziselwa ukunyusa kuhlu lwakho. Esigabeni sesibili, udinga ukusebenzisa lawa magama angukhiye ngokuyisisekelo esihlokweni sakho nencazelo yokwenza uhlu lwakho luhle kahle futhi lubonakale kukhasi lemiphumela yosesho lwe-Amazon. Kodwa-ke, akufanele uqede uhlu lwakho ngamagama angukhiye njengamanje ama-algorithm ama-Amazon ahlakaniphile futhi ungajeziswa ngakho. Yingakho wenze isihloko sakho semvelo, siqondile futhi uhlanganyele ukwenza abathengi ukuchofoze kuyo kusukela emiphumeleni yokusesha. Ukwenza lula amagama akho angukhiye wokucwaninga, ungasebenzisa elinye lamathuluzi okusikisela okuzenzakalelayo afana ne-Google Keyword Planner noma i-Amazon Keyword Tool.
Ukuhlelwa komkhiqizo ohlelwe kahle
Ukufakwa kuhlu komkhiqizo okwenziwe kahle kungakusiza ukuwina ukuthengisa isikhathi eside. Ezihlokweni zethu zangaphambilini, sinikeze izifundiswa eziningiliziwe ukuthi singenza kanjani uhlu lwakho luphumelele. Yingakho ngizobhala uhlu oluyisisekelo kuphela lomkhiqizo wokufakwa kokusebenza okungahle kuthinte izinga lakho lokuchofoza nokuguqulwa:
Igama eliphathekayo elithembekayo nelokubamba;
isihloko esichazayo somkhiqizo;
Incazelo ephelele yomkhiqizo nazo zonke izici zomkhiqizo ezidingekayo nezinzuzo ezibonakalayo;
amaphuzu e-bullet ahlakaniphile;
Izithombe zemikhiqizo yekhwalithi enekhono lokusondeza;
Ububanzi bubekwe amakhasimende e-Amazon ngalokho abazizwa njengenani nokuthi yini abazimisele uchithe kuso. Intengo yakho kufanele ibe nengqondo futhi isekelwe ekuthambekeni okujwayelekile kwamakethe. Ingakwazi ukuphakamisa noma ukuwa ngenkathi noma ngokubonakala kwenguqulo entsha ethuthukisiwe yomkhiqizo wakho. Intengo yakho akufanele ibe phansi kakhulu njengoba ingasho izinkinga zekhwalithi kumakhasimende akho angase abe khona. Yingakho zama ukugxila kumkhiqizo ohola we-niche yakho.